U-Anastasia Reshetova uye wagcwalisa i-wardrobe kunye nengubo endala yoboya, ifoto
Umkhenkethi waseTimati uqhuba i-microblogging yakhe. Kwi-Instagram ye-Anastasia Reshetova, iifoto ezintsha zivela rhoqo. Ubuhle bugcina ababhalisi bakhe bexesha kunye neendaba zakutshanje.
Abo balandela ngokusondeleyo ubomi buka-Anastasia Reshetova bayazi kakuhle ukuba kwisigqobo sakhe sambatho kuphela izinto eziphathekayo zanamhlanje. Intombazana ilandelelanisa iifashini ngokucophelela, ukuze izindebe zayo zibonise indlela ekhoyo.
Ingubo endala yoboya yavuya ngoAnastasia Reshetova
Bangaphi amaxesha ababhalisile bahlambalaza iinkwenkwezi ngenxa yothando lwabo lwentsikelelo yendalo. Kwizidalwa ezidumiweyo, ezikholiswayo zokubonisa izambatho zobushushu ezintsha, zihlala zixubusha iingxoxo: abaxhamli banqwenela ukuyeka ukubulawa kwezilwanyana ngenxa yesikhumba esihle. UAnastasia Reshetova wagqiba ekubeni afudumale ebusika. Imodeli ethunyelwe isithombe esitsha kwiphepha layo ngeengubo ezimhlophe zeegusha.
Intombi uTimati uye wavala ixesha elide u-Instagram, kodwa wakhawuleza ukuzolalisa izilwanyana zezilwanyana, esithi wayegqoke isambatho seboya esenziwe ngobumnandi. Ngaphezu koko, le minyaka i-20 sele isele:
Xa udala le ngubo yoboya, akukho silwanyana esonakele. Ubumvu bobugcisa. Uneminyaka engama-20 ubudala. Ndiyinto enamandla yokwenza izinto zokuvuna. Unqume ukunika le ngubo yomphefumlo ubomi obini, unqume amaqhosha amaSoviet
Omnye unokudumisa kuphela u-Anastasia, owathi, ngomzekelo wakhe, wabonisa indlela yokujonga kakuhle kwaye ngexesha elifanayo ugcine kwixabiso elibiza.
Akungabazeki: iifoto kunye namavidiyo e-Pelagia ekhulelwe
Iifoto zikaZhanna Friske kunye nendodana yakhe zapapashwa kuqala ngudade womculi
Usuku lwe-Valentine kwi-Instagram celebrities. Iifoto ezintsha.
U-Katya Gordon udaniwe ngokunyaniseka nokunyaniseka, isithombe
UBawo Zhanna Friske utshele iinkcukacha ezitshaqisayo zokufa kwentombi yakhe
I-Sobchak ekhulelwe ibonakala ingabonakali kwiphepha le-gloss, isithombe
Ii-Muffins nge-Bulgarian pepper kunye neCheddar cheese
Indlela yokomeleza imemori kunye nezilwanyana zomntu?
Ukusetyenziswa kwedill kumachiza omntu
Izifo ze-Gynecological, purpent colpitis
I-Eurovision abaphumeleleyo kuyo yonke iminyaka-uluhlu
Indlela yokuhambisa ngokufanelekileyo uhlahlo lwabiwo-mali
Iingxaki kunye neengxabano zobuntwana
I-Acne ngasemva: njani ukujongana nabo?
Eyona nto ifanelekileyo
UActor Alexander Golovin
I-bananas e-cocktail elula
Indlela yokukhetha i-nail polish